ठमेलको ट्राफिक ‘माफिया’ व्यापारी तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठको कब्जामा : एसएसपी बसन्त पन्तकै कनेक्सन ! | Diyopost
ठमेलको ट्राफिक ‘माफिया’ व्यापारी तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठको कब्जामा : एसएसपी बसन्त पन्तकै कनेक्सन !
काठमाडौं, ३१ वैशाख । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महासाखाका प्रमुख एसएसपी बसन्त पन्तले ठमेल क्षेत्रमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी नै एक माफिया व्यापारीको जिम्मा लगाएको खुलाशा भएको छ ।
ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका विवादास्पद व्यापारी तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले ट्राफिक प्रहरीकै दुरुपयोग गरेका पाइएको छ । महासाखाका प्रमुख बसन्त पन्तलाई आफ्नो होटल थर्ड आई, यीङयाङमा बोलाएर खानपान गराउने गरेका श्रेष्ठकै लगानी र आयोजनामा मंगलबार एक कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको छ ।
ट्राफिक प्रहरी आयोजना गरेको कार्यक्रम भनेर सहभागीलाई निम्ता गरिए पनि उक्त कार्यक्रम आयोजक भने व्यापारी श्रेष्ठ नै रहेको पाइएको छ ।
पर्यटन व्यावसायको आवरणमा कलेज र म्यानपावर चलाउने तेजेन्द्र कुनै समय लागुऔषध दुव्र्यसनको आरोपमा पक्राउ समेत परेका थिए ।
उनै श्रेष्ठको लगानीमा ठमेल स्थित होटल यात्रीमा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको पाइएको छ । मंगलबार दिउँसो २ बजेदेखि शुरु भएको कार्यक्रम उद्घाटन गर्न एसएसपी बसन्त पन्त र सोह्रखुट्टेका डिएसपी गौतम मिश्र पुगेका थिए ।
‘ट्राफिक सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रम आयोजक तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठ हो,’ होटल यात्रीको टेलिफोन नम्बर ४४२३९४७ मा सम्पर्क गर्दा फोन उठाउने व्यक्तिले भने,‘ट्राफिक प्रहरीले आयोजना गरेको कार्यक्रम होइन ।’
होटल यात्रीका मालिक सागर पाण्डे फेक रेस्क्युमा छानबीनमा परेका व्यक्ति हुन् । पाण्डे कुनै समय ट्रेकिङ व्यावसायीहरुको छाता संगठन टानका महासचिव समेत थिए ।
ठमेल क्षेत्रका प्रहरीलाई श्रेष्ठले दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ । अचम्म त के छ भने ठमेल विकास परिषद समेत उक्त कार्यक्रमको आयोजक थिएन । उनै श्रेष्ठ पूर्व अध्यक्ष रहेको संस्थालाई समेत थाहा नदिइ उनले ठमेलमा ट्राफिक सचेतना सम्बन्धि कार्यक्रम गरेका थिए ।
पर्यटन व्यावसायीलाई ९८४१२४९६०८ नम्बरबाट कार्यक्रमबारे सन्देश पठाइएको छ । उक्त नम्बर ट्राफिक प्रहरीको नभई तेजेन्द्र निकट व्यापारीको भएको समेत खुलेको छ । उक्त व्यक्तिले ट्राफिक प्रहरी महासाखा रामशाह पथले कार्यक्रम आयोजना गरेको उल्लेख गरेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार ठमेल पर्यटन विकास परिषदले त्यहाँ कार्यरत ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिने गरेको छ ।
ठमेल क्षेत्रमा रवाफ देखाउनकै लागि श्रेष्ठले उच्च पदस्त प्रहरीलाई आफ्नो होटलमा डिनर गराउँदै आएका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख बसन्त पन्तलाई समेत पटक पटक श्रेष्ठकै थर्ड आई र यिङयाङ रेष्टुरेन्टमा भेटिने गरेका छन् ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महासाखाका प्रवक्ता जयराज सापकोटाले कार्यक्रम बारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । केही बेरपछि टेलिफोन गरी उनले समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना भएको बताए । कार्यक्रमको संयोजन तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले गरेको पनि सापकोटाले बताए ।
‘म डिटेलमा बुझेर खबर गर्छु । त्यो कार्यक्रमबारे मलाई थाहा छैन । अहिलेसम्म केही रिपोर्ट आएको छैन,’ सापकोटाले भने,‘म बुझेर मात्रै खबर गर्न सक्छु ।’